‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा’ गाउँपालिका अध्यक्षको पत्नीको नाममा पनि डोजर देखि गापा नाम – Vision Khabar
Loading... आजः शनिबार, फाल्गुन १५, २०७७
‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा’ गाउँपालिका अध्यक्षको पत्नीको नाममा पनि डोजर देखि गापा नाम
। ५ भाद्र २०७५, मंगलवार २२:५१ मा प्रकाशित
रोल्पा,५ भदाै । ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा’ यही नाराले धेरैले स्थानीय तहमा जित हात पारे । सोही नारा लगाएर निर्वाचित भएर पुगेका तिनै जनप्रतिनिधिहरु भने अहिले अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधिका काम हेर्दा गाउँगाउँ सिंहदरवार नभई एउटा सिंहदरबारले गर्दै आएको भ्रष्टाचार र कमिशन गाउँगाउँसम्म पुगेको आभास भइरहेको छ । अनावश्यक करको बोधले थामि नसक्नु भएको छ । यसको एउटा उदाहरण हो सुकिदह गाउँपालिका ।
गाउँपालिकामा जनताले उत्पादन गरेका स्याउ आलुदेखि बाख्रापालनमा समेत कर थुपारिएको छ । यसको भागेदार हुन् अध्यक्ष वीरबहादुर केसी । तर, उनी चाँही जनताले तिरेको करकै पैसाले गाड भाडामा ल्याएर सुविधा लिइरहेका छन् ।
उनी भे १ च २७८५ नं. को गाडी चढ्छन्, जुन भाडामा ल्याइएको हो । यो गाडी गाउँपालिकाका अन्य प्रतिनिधिले भने प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । उपाध्यक्षसमेत गाडी चढ्न पाउँदैनन् ।
अध्यक्ष केसी आफैं पनि डोजर मालिक हुन् । उनले आफ्नै लगानीमा डोजर किनेर गाउँको सडक निर्माणका लागि भाडामा लगाइरहेका छन् । उनले कमिसनकै भरमा उनको डोजर विकासे काममा प्रयोग हुने गरेको छ । अध्यक्षको कार्यशैली गाउँको विकास भन्दा पनि मिलेर खाउँ भन्ने तरिकाको छ’ एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँलई विकास होइन, कमिसन चाहिएको छ ।’
जिल्लामा डोजर साहुँ धेरै
रोल्पामा कतिपय जनप्रतिनिधिको आफ्नै डोजर छ । कतिपयले आफ्नै परिवारको सदस्यका नाममा डोजर चलाइरहेका छन् । डोजर भएका नेता र कार्यकर्ताले डोजर नभएका जनप्रतिनिधि रिझाएर सडक खन्ने योजना हात पार्छन् ।
रोल्पामा जनप्रतिनिधिको डोजर चलाउने विषयमा विवाद भएको थियो । माडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले आफ्ना छोरा र आफन्तमार्पmत डोजर चलाइरहेका छन् । सारिगा–कुकुरगाडे सडक जोड्ने योजनामा उनकै डोजर प्रयोग भयो । विवादकै कारण उनको मात्रै डोजर चलाउने योजना असफल बन्यो ।
गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले निर्वाचित हुनुअगाडि नै डोजर खरिद गरी गाउँमा सडक खन्दै आएका थिए । निर्वाचित भएपछि गाउँपालिकाका योजनामा केही सडक उनकै डोजरले खन्यो ।
थबाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीको पत्नीको नाममा पनि डोजर छ । सो डोजरले वडाका सडक खन्न उनकै डोजरले लाखौंमा काम पायो । माडी गाउँपालिका ६ नं. वडा कोर्चाबाङका अध्यक्ष खर्कबहादुर पुनको पनि डोजर छ । अध्यक्षकै डोजर भएको वडामा अरु डोजरवालाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् ।